Shirkii Madasha wadatashiga doorashooyinka oo aan weli furmin iyo caqabadaha ku gudban. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Shirkii Madasha wadatashiga doorashooyinka oo aan weli furmin iyo caqabadaha ku gudban.
Weli waxaa hakad kujira furitaanka shirkii ay ku balan sanaayeen in uu u furmo Golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxda Dowlad Goboleedyada & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Waxaa shirkaan oo uu qorshihiisu ahaa inuu furmo Sabtidii la soo dhaafay uu dib ugu dhacay Axaddii shalay oo uu furmi waayey markale dib u dhacay kadib markii uu shirka diiday ka qeb galkiisa Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen.
Warar aan helnay ayaa sheegaya in xalay ay yeesheen kulan khadkantaleefonka ahaa, Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynaha Galmudug oo wada jooga iyo Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo ku maqan dalka Turkiga, waxaana kulanka uu ahaa mid lagu doonayay in lagu qanciyo Madaxweynaha Hir-Shabeelle.
Mudane Maxamed Xuseen Roible Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta ayaa dadaal ugu jira qabsoomida shirka si oo bilaabo dardar gelinta howlaha doorashooyinka.